Waa Sidee Xaaladda Caafimaad ee Dhaawacyadii Turkiga La geeyay.Q-2aad. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
Waa Sidee Xaaladda Caafimaad ee Dhaawacyadii Turkiga La geeyay.Q-2aad.
Ankara(FMN)-Shabakada Warbaahinta ee Feer-feer Media Network ayaa heshay macluumaad dhab ah oo ku saabsan Xaaladda caafimaad iyo nololeed ee ay ku suganyihiin dhaawacyadii dhawaan la geeyay dalka Turkiga.
Xogtan oo aanu ka helnay xubno ka tirsan Safaarada Soomaaliya ku leedahay dalka Turkiga oo iyagu mid mid ubooqday bukkaanadaasi ayaa tibaaxaysa in dhaawacyadaasi ay soo kabanayaan oo xaaladooda caafimaad ay haatan aad uwanaagsantahay.
Guud ahaan Bukaanada dalkasi legeeyay ayaa ah 34 bukaan waxayna ku jiraan oo loo kala qeybiyay ilaa iyo lix Isbitaal.Hore waxaanu ubaahinay Xogta ilaa 5 bukkaan oo ku jira Isbitaalka weyn ee Ataturki.Haatana,waxa aynu idinla wadaagi doonaa xaalada ilaa 13 bukaan oo ku jiro Isbitaalka weyn ee Isbitaalka weyn Polatli Hospital oo ah isbitaalka ugu badan dhaawacyada la keenay Turkiga.Kuwaas oo kala ah:-
1) Yusuf Maxamed Aden waa 26 jir, waxa uu dhaawac ka soo gaaray gacanta bidix suxulka, waxaa lagu sameeyay qaliin waxaana loo geliyay plastic xaaladiisa caafimaad aad ayay u wanaagsantahay, waxaa la socoto xaaskiisa Fadumo Maxamed Cumar.
2) Abdalla Omar Mayow waa 49 jir, waxa uu dhaawac ka soo gaaray oo uu ka jabay gacanta midig iyo lugta midig, gacanta waa loo kabay lugtana biro ayaa loo geliyay xaaladiisa caafimaad aad ayay u wanaagsantahay waxaa la joogo Abdulle Ibrahim Abdalla.
3) Salma Hussein Aminullah waa 19 jir, Isbitaal digfeer ayaa lug looga soo gooyay lugata kalana qeybta dambe labo dhaawac kale ayay ka laheed waana la daaweeyay xaaladeeda caafimaad waa ay roontahay waxaa la joogo aabaheed Hussein Aminullah.
4) Maxamed Ashkir Cawaale waa 80 jir, waxa uu dhawac ka soo gaaray oo uu ka soo jabay lugta bidix waana la kabay, madaxana dhaawac yar ayaa ka soo gaaray waana la tolay, qeyb yar oo jirkiisa kalana waa uu yara gubtay, xaaladiisa caafimaad aad iyo aad ayay u fiicantahya si fiicanna waa uu noogu sheekeeyay talooyin bandanna waa uu soo gudbiyay waxaa la joogto xaaskiisa Hadiya Sheikh Yusuf, waxaa kaloo dibadda ugu timid gabadhiisa.
5) Abdisalam Osman Salah waa 32 jir, xabadihii la furay qaraxa kadib ayaa waxyeelo gaarsiiyay waxa ay wax ka gaareen caloosho xabad ayaa dhaxfariisatay mindhicirka waana laga saaray, sidoo kale waxa ay wax ka gaaraeen labada lugood waxayna xabadda ugu dhacday neerfaha lugaha, lugta midig dareemaheeda waa uu soo laabtay tan bidix ayaa wali maqan waxaa la socdo walaakiis Ahmed Osman Salah.
6) Ahmed Hussein Warsame 29 jir dhabarka iyo madaxa ayaa dhaawac ka soo gaaray, qaliin ayaa loogu sameeyay dhabarka, waana lagu guuleestay, dhabarka dhaawaca ka soo gaaray dartiis dareemaha lugaha ayaa ka tagay, dareemaha lugaha waa uu soo laabtay xaaladiisa caafimaad aad ayay u wanaagsantahay waxa la joogo Abdirashid Ahmed Mire.
7) Mahad Abdi Sheikh waa 27 jir, waxa uu dhaawac ka soo gaaray kilida midig dadaal dheer kadib xaaladiisa caafimaad waa ay roontahay waxaa la joogo Hussein Abdulkadir.
8) Adan Muse Hassan waa 59 jir, waxa uu dhaawaca ka soo gaaray oo qeybo ka mid ah lafihiisa burburtay jilibka hoostiisa hilib yarna ka maqan, Adan waxaa lagu sameeyay operation waxaana lagu guuleeystay in la badbaadiyo lugtiisa inkastoo uu qabo Dhiig kar Sokor iyo Gaas, waxaa la socdo wiilkiisa Hassan Adan Musse xaaladiisa caafimaadna aad ayay u fiicantahay.
9) Ali Mohamod Mohamed waa 36 jir, dhaawaca waxa uu ka gaaray lugta midig waxaa lagu sameeyay operation waana lagu guuleysatay biraa loo geliyay dibna waa looga saari doonaa, xaaladiisa aad ayay u fiicantahay waxaa la joogo Dahir Muse Fidow.
10) Abdulkadir Mohamed Abdulle, (Abdulakdir OK) waa 29 jir, dhaawaca waxa uu ka soo gaaray qoorta, gacanta bidix iyo gubniin wajiga ah, madaxa iyo qoortana qeyb kamid ah oo yar yar ayaa laga tolay wajigana waa loo dhayay, gacantana waa loo kabay xaaladiisa caafimaad aad ayay u wanaagsantahay, maanatana buukanada kale asaga ayaaba nala soo booqanaayay, waxaa la socoto xaaskiisa Samira Abdirahman Adan.
11) Istar Ali Mohamed waa 26 jir waxa uu dhaawac ka soo gaaray gacanta bidix iyo lugta bidix qaliin lagu sameeyay kadib waa loo kabay lugtii gacantiina waa loo badbaadiyay hadda xaaladeeda caafimaad aad ayay u wanaagsantahay waxaa la joogo ninkeeda Sheikh Nur Maxamed Sheikh.
12) Mursal Sheikh Ahmed waa 42 jir waxa uu ka jabay oo uu dhaawaca ka soo gaaray gacanta midig iyo lugta midig waana loo kabay xaaladiisa caafimaad aad ayay u wanaagsantahay, waxaa la socodo walaalkiis Abdi Sheikh Ahmed.
13) Faadumo Xaaji Ali waa 37 jir waxa uu dhaawac ka soo gaaray madaxa, waxa ayna ku jirtaa qeybta Emergenciga, xaaladeeda caafimaad sidii hore waa ay ka roontahay wayna sheekeeneysaa balse qeybta degdega ayaa lagu ilaalinayaa. Waxaa la socoto gabadhheda Luul Qaasim Hussein.
Previous Previous post: Madaxweyne;Siilaanyo Oo Xadhiga Ka Jaray Dhismo Cusub oo Laga Hirgaliyay Magaalada Burco.
Next Next post: Maxay Ka Wada Hadleen Museveni Iyo Farmaajo?